မက်ဆီခေတ်အလွန် ဘာစီလိုနာမှာ ဘယ်သူ့အင်္ကျီကရောင်းအား အကောင်းဆုံးလဲ? – Play Maker Sports Journal
မက်ဆီခေတ်အလွန် ဘာစီလိုနာမှာ ဘယ်သူ့အင်္ကျီကရောင်းအား အကောင်းဆုံးလဲ?
ဒါပေမယ့်လက်ရှိအချိန်တွင်ဘာစီလိုနာရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအင်္ကျီကတော့ လီယွန်နယ်မက်ဆီအမည်ပါကျောနံပါတ်၁၀အင်္ကျီကရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့အင်္ကျီရောင်းအားကဘာစီလိုနာအင်္ကျီရောင်းအားအားလုံးရဲ့၈၀ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေပြီး ယူရိုသန်း၂၀မှသန်း၃၀အတွင်းရှာဖွေပေးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားငါးကြိမ်ရဘာစီလိုနာဟာလီယွန်နယ်မက်ဆီထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်မှာရုန်းကန်နေရပြီးချန်ပီယံလိဂ်တွင်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးနိမ့်ထားသလို လာလီဂါတွင်လည်းအမှတ်ပေးဇယားအဆင့်၈နေရာတွင်ရပ်တည်နေပါတယ်။
မက္ဆီေခတ္အလြန္ ဘာစီလိုနာမွာ ဘယ္သူ႔အက်ႌကေရာင္းအား အေကာင္းဆုံးလဲ?
ဒါေပမယ့္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ဘာစီလိုနာရဲ႕ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံးအက်ႌကေတာ့ လီယြန္နယ္မက္ဆီအမည္ပါေက်ာနံပါတ္၁၀အက်ႌကရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။မက္ဆီရဲ႕အက်ႌေရာင္းအားကဘာစီလိုနာအက်ႌေရာင္းအားအားလုံးရဲ႕၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနၿပီး ယူ႐ိုသန္း၂၀မွသန္း၃၀အတြင္းရွာေဖြေပးထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားငါးႀကိမ္ရဘာစီလိုနာဟာလီယြန္နယ္မက္ဆီထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ကြင္းတြင္းကြင္းျပင္မွာ႐ုန္းကန္ေနရၿပီးခ်န္ပီယံလိဂ္တြင္ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ကိုအိမ္ကြင္းမွာရႈံးနိမ့္ထားသလို လာလီဂါတြင္လည္းအမွတ္ေပးဇယားအဆင့္၈ေနရာတြင္ရပ္တည္ေနပါတယ္။
ဂွါဒီယိုလာကို မငြင်းနိုင်တဲ့အချက်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်သွားမယ့် ဘာစီလိုနာ